Sawiro:- Ciidamo la kala dhex-dhigay laba Maleeshiyo Beeleed ee ku dagaalamay Xananbuure
HomeWararka SomaliyaGalmudugSawiro:- Ciidamo la kala dhex-dhigay laba Maleeshiyo Beeleed ee ku dagaalamay Xananbuure
February 12, 2021 Galmudug, Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa xiisad colaadeed laga dareemayay degaanka Xananbuure ee Gobolka Galgaduud, halkaas oo dhawaan dagaal geystay qasaaro dhimasho iyo dhaawac ah uu ku dhex-maray laba maleeshiyo Beeleed.
Dowladda Soomaaliya ayaa Maanta degaanka Xananbuure geystay Ciidamo isugu jira Gorgor , Booliis iyo Nabad sugida Galmudug, iyaga oo kala dhex-galay labada maleeshiyo beeleed ee uu dagaalka dhex-maray.
Xildhibaano & Wasiiro ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa tegay degaanka Xananbuure, iyaga oo ku guuleystay inay kala qaadaan maleeshiyaadka ishor-fadhiyay, waxaana socda dadaalo kale oo lagu xalinaayo colaad beeleedaas.
Wasiirada & Xildhibaannada ka socda dowladda Soomaaliya ayaa kulamo gaar gaar ah la leh Odayaasha & waxgaradka degaanka xananbuuro si xal loogu helo colaad beeleeda ka jirta degankaas.
Labadii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa degaannada Halmudug kusoo kordhay colaad beeleedyada iyo weerarada ay fulinayaan Al-Shabaab, iyada oo Madaxda Galmudug aysan qaadin wax tallaabo ah marka laga reebo howlgallo aan badneyn oo ay sameeyaan Ciidamada dowladda Soomaaliya.
James Swan oo Dowlada dhoor ah kala hadlay Arimaha Doorashooyinka Dalka Somaliya
War deg deg Ah:- Qarax ka dhacay Isgooska Sayidka ee Magaalada Muqdisho